7 Gebze နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်ခြင်း RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliမတူညီသောလိုင်းများမှ Gebze နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ TransportationPark ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် A.Ş.7ကွဲပြားသောလိုင်းများဖြင့် Gebze နည်းပညာတက္ကသိုလ် (GTÜ) သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဒေသအသီးသီးမှဘတ်စ်ကားများဖြင့်7သည်ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်သို့အဆင်ပြေစွာသွားလာရေးအတွက်အဆင်ပြေစေရန်စီစဉ်ပေးသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ပန်းခြံ၏ညှိနှိုင်းမှုအောက်တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးတက္ကသိုလ်၏ 440, 490, 515, 525, 525S, 530 နှင့် 560 သို့ဆက်သွယ်ပြီးကျောင်းသားများသည်ဤလိုင်းများသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများနှင့်အတူ7244 TIME
GTÜဖွင့်လှစ်လိုက်သောအခါ Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်အတွေ့အကြုံရရှိနိုင်သည့်သိပ်သည်းမှုကိုလျှော့ချရန်ခရီးစဉ်များတိုးပွားစေသည့်အတွက်ကျောင်းသားများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူစေသည်။ 244 လိုင်းသည်အသွားအပြန်7၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ကျောင်းသားများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးနာရီများအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ကျောင်းသားများအပြင်ဒေသခံများကမကြာခဏနှစ်သက်သောဘတ်စ်ကားများသည်ဤဒေသရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေသည်။
TransportationPark 12 ခရိုင်မှ Kocaeli တက္ကသိုလ်သို့လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 02 / 10 / 2019 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူတူရကီရဲ့အငယ်ဆုံးရေတပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအဘယျသို့ '' က၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ, Kocaeli တက္ကသိုလ် (ရေနံပေါင်းတင်) ၏ကွဲပြားခြားနားသောခရိုင်ကနေစုစုပေါင်း 12 ulaşımpark။ Metropolitan မြူနီစီပယ် Kocaeli အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု 336 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဘတ်စ်ကားနှင့်အတူပေးသည်။ …
ကွဲပြားခြားနားသောအခွန်မှ Bursa ပြည်တွင်းတိုးရစ်နိုင်ငံခြားရေးတိုးရစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို 31 / 01 / 2018 Bursa အတွက်နိုင်ငံခြားခရီးသွား up ည့်သည်များစိတ်ပျက်စရာကောင်းသော နိုင်ငံခြားခရီးသည်များအတွက် Bursa Ropeway အပြန်အလှန်ခမှာ 57 lira ပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့အများကြီးပိုမိုနှစ်သက် cable ကိုကားထဲတွင်တူရကီ Uludag ထွက်ပေါက်အော်ပရေတာများ၏အရေးကြီးသောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများတစ်ခုမှာ ...
Gebze အစ္စတန်ဘူလ်ulaşımparkထံမှလွယ်ကူစွာ Access ကိုမှလျှို့ဝှက်ချက် 19 / 07 / 2019 Kocaeli Metropolitan Municipality ၏လက်အောက်ခံ TransportationPark A.Ş. ၏ Gebze Garage သည် Kocaeli နှင့် Istanbul အကြားတံတားအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ပြည်နယ်နှစ်ခုနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်သောနေရာတွင်ကားဂိုထောင်သည် Gebze, ıayırova, Darıcaနှင့်Dilovasıvatandaşတွင်တည်ရှိသည်။
Bursada အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုတည်းလိုင်းဟုမေးပါလိမ့်မည် 09 / 01 / 2013 ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသောဥရောပစံနှုန်းများခေါ်ဆိုခစင်တာကိုအလွယ်တကူသိရှိစေရန်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Bursa Bursa မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီBURULAŞ'ınထံမှအများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်…
ပင်မြေအောက်ရထား Kocaeli လိုအပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသောသုံးခုခရီးသည်လိုင်းတစ်ခုမှာ 17 / 12 / 2012 လိုင်းသုံးခုထဲမှတစ်ခုသည် Kocaeli ၏မြို့ပြဆင်ခြေဖုံးလိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် AKP Kocaeli အမတ် Fikri Isik၊ Kartepe အဖွဲ့အစည်းမှမန်နေဂျာများနှင့်အကဲဖြတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Kartepe နှင့် Kocaeli I အပေါ်အလင်းအသစ်
TransportationPark 12 ခရိုင်မှ Kocaeli တက္ကသိုလ်သို့လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ကွဲပြားခြားနားသောအခွန်မှ Bursa ပြည်တွင်းတိုးရစ်နိုင်ငံခြားရေးတိုးရစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို
ပင်မြေအောက်ရထား Kocaeli လိုအပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသောသုံးခုခရီးသည်လိုင်းတစ်ခုမှာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အထပ်သွားလာလမ်းကြောင်းဟောင်းအလုပ်တပ်ဆင်ကျော်သို့မဟုတ်ပင်အိပ်ပျော်ရထား stacked ခံရဖို့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလှည်းများ၏တကယ်တော့ Ray န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးယောဘသည်နှင့်အတူ stacked
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အရထားလမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်းဟူသောဖြတ် stacking
ပင် Bursa အတွက်အဟောင်းဘတ်စ်ကားရေးဆွဲ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (203) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)